सरस्वती पूजा किन मनाउने र कसरी मनाउने ? आफुले पढेर सबैलाई सेयर गर्नुहोला – च्यालेन्ज नेपाल
सरस्वती पूजा किन मनाउने र कसरी मनाउने ? आफुले पढेर सबैलाई सेयर गर्नुहोला
हामी सरस्वती पूजा मनाउँछौं । पूजआजा गर्छौं । सरस्वतीको तस्विर पनि देखेका छौं । त्यसको अर्थ के होला ? सरस्वती स्वरुपले के अर्थ राख्छ ?
यसलाई हामी ‘बसन्त पञ्चमी’ भन्छौं । ‘श्रीपञ्चमी’ भन्छौं । ज्योतिष विज्ञान अनुसार कुनैपनि शुभ कार्य थालनीको लागि यो राम्रो साइत हो । त्यसैले यस दिन राम्रो काम प्रारम्भ गर्न अतिरिक्त साइत हेराइरहनुपर्दैन । त्यसैले त, यस दिन साना बच्चाहरुलाई अक्षर लेख्न सिकाइन्छ । अर्थात अक्षराम्भको उपयुक्त अवसर मानिन्छ, सरस्वती पूजालाई ।
हामीकहाँ बर्षभर मूख्य तीन देवीको पूजा मनाइन्छ । लक्ष्मी, दुर्गा र सरस्वती । लक्ष्मी धनकी देवी । दुर्गा शक्तिकी । सरस्वती विद्याकी । वास्तवमा यी प्रतिकात्मक देवी हुन् । अर्थात जीवनमा पूर्णता हासिल गर्नका लागि हामीसँग तीन चिजको खास महत्व हुन्छ, धन, विद्या र शक्ति ।
एक्कासी शिब लिङ्गको उत्पति हेर्नुहोस तलको live भिडियो
Tags: सरस्वती पूजा किन मनाउने र कसरी मनाउने ? आफुले पढेर सबैलाई सेयर गर्नुहोला
Previous ओलीले आफ्नो कदम सही ठहर्‍याउन राज्यकोष रित्याउन थाले : जनमोर्चा
Next सरस्वती पुजाको दिनमा यस्ता काम गर्नाले बिद्याको कमी कहिले हुने छैन ( यो पोस्ट पुरा पढ्नुहोस )